के हो 'सिक्स्थ सेन्स' ? कसरी यसलाई सक्रिय पार्ने ?
बुधबार, जेठ ४ २०७९ ०२:१६ AM
बुधबार २१ बैशाख २०७९ ०८:२१ AM
काठमाडौं - सिक्स्थ सेन्स वा छैठौं इन्द्रियका बारेमा तपाईंले अवश्यै सुन्नुभएको होला । हुन त हाम्रो शरीरमा पाँच इन्द्रिय हुन्छन् : आँखा, नाक, जिभ्रो, कान र छाला ।
तर यीबाहेक अर्को एउटा इन्द्रिय पनि हुन्छ । त्यो देखिन्न, त्यसलाई अनुभव मात्र गर्न सकिन्छ । यसलाई छैठौं इन्द्रिय भनिन्छ । तपाईंलाई कतिपय अवसरमा घटनाको आभास पहिले नै भएको अनुभव भएको होला । यो हाम्रो छैठौं इन्द्रियको कमाल हो ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार, छैठौं इन्द्रिय हरेक मनुष्यमा हुन्छ र यो मानसिक चेतनासँग जोडिएको प्रक्रिया हो । यसैको माध्यमले व्यक्तिले भविष्मा हुने घटनाको पूर्वाभास पाउँछ । यस्तो पूर्वाभासको संकेत सपनामा आउन सक्छ ।
हाम्रो शिरको तल्लो भागमा एउटा कोमल छिद्र हुन्छ । त्यहाँबाट सुषुम्ना नाडी मेरुदण्ड हुँदै मूलाधारसम्म पुग्छ । यही सुषुम्ना नाडी सात चक्र र छैठौं इन्द्रियको केन्द्र मानिएको छ ।
साधारणतया यो इन्द्रिय शिथिल अवस्थामा रहन्छ तर यसलाई अनेक तरिकाले जागृत गर्न सकिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने मानिसले भविष्यमा हुने घटनाको पूर्वाभास पाउँछ ।
छैठौं इन्द्रियको सहायताले हामी अर्काको मनमा भएको कुरा पनि पत्ता लगाउन सक्छौं र धेरै टाढा बसेको मानिसको बोली पनि सुन्न सक्छौं । कुनै व्यक्तिको सिक्स्थ सेन्स पूरै एक्टिभेट भएमा उसले संसारको सबै कुरा थाहा पाउँछ र उसमा अनन्त क्षमताको विकास हुन्छ ।
छैठौं इन्द्रिय सक्रिय पार्नका लागि प्राणायाम, ध्यान, त्राटक क्रिया, योगनिद्रा लगायतका उपाय अपनाउन सकिन्छ । एजेन्सी